Apple TV + si ay u soo bandhigaan dokumentar ku saabsan xayeysiinta Pepsi ee laga soo bilaabo 90-naadkii | Wararka IPhone
Apple TV + si ay u soo bandhigaan dokumentar ku saabsan xayeysiiska Pepsi ee 90-maadkii
Maaddaama Apple ay ku dhawaaqday barnaamijkeeda fiidiyowga ee qulqulaya, Apple TV + ma heli karno kaliya taxanaha iyo filimada, laakiin sidoo kale bandhigyada hadalka iyo dokumenteriyada. Sida laga soo xigtay Deadline, Apple ayaa iibsatay dokumenteriga Jets in 2020, Iyada oo ku saleysan olole ganacsi oo Pepsi ah 90-yadii.
Ololahan ganacsi, baa baabtiisay sida Macaan Pepsi, Hel Waxyaabo (oo aan u turjumi karno sida Pep Pepsi, wax u hel), loo oggolaaday dadka isticmaala inay helaan dhibco ay ku beddelaan alaabada, ahaanshaha diyaarad khatar ah (diyaarad toos u duushay oo aan ku arki karno filimka Been khatar ah) abaalmarinta ugu muhiimsan ee lagu beddelo 7 milyan oo dhibic.
Dhibaatadu waa taas hal qof ayaa gaadhay 7 milyan oo dhibcood laakiin laga bilaabo Pepsi waxay sameeyeen kuwa waalan. Diyaaradan ayaa qiimaheedu ahaa 35 milyan oo doolar. Sidii la filayay, isticmaaleha ay saameysay dalacsiintan ayaa Pepsi geeyay maxkamad, kaasoo sheegtay in ay ku siin doonto diyaaradan abaalmarin ahaan adeegsiga ururinta 7 milyan oo dhibic waxay ahayd kaftan.
Documentary-gaani waa quusitaan nostalgic ah oo ku saabsan dhaqanka pop-ka ee 90-maadkii oo ka sheekeeyay sida John Leonard uu ugu qaatay xayeysiiska Pepsi sanadkii 1996 qiimaha wajiga. Waa inaad caqli xumo noqotaa inaad aaminto inaad mahadsanid dallacsiinta waxaad heli kartaa badeecad lagu qiimeeyo dhowr milyan oo doolar.
Dokumentigan cusub waxaa sameeyay James Lee Hernández iyo Brian Lazarte, oo ah isla soosaarayaasha dukumintiga laga heli karo HBO McMillion, dukumenti dokumenti ah oo sheegaya sida khiyaano ayaa lagu dhex maray Monopoly caan ah McDonald's in ka badan 24 milyan oo doolar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple TV + si ay u soo bandhigaan dokumentar ku saabsan xayeysiiska Pepsi ee 90-maadkii
Ogeysiis ganacsi oo cusub ee AirPods Pro